MORMORII FI FINFINNEE-Abonketi Fayissa’TIIN – Beekan Guluma Erena
MORMORII FI FINFINNEE-Abonketi Fayissa’TIIN	Beekan Erena
Politics Category July 22, 2016OROMO
MORMORII FI FINFINNEE-Abonketi Fayissa’TIIN
Biyyi Misir/Egypt kennaa laga Mormor/Abbayaati. Lagni Mormor immoo kennaa Itiyoophiyaati. Mormoriin eenyumti illee Itiyoophiyaadhaaf haa kennuutii Misir waa’ee laga kanaaf Itiyoophiyaa waliin mariidhaan walii galuu irra darbitee filannoo biroo homaayyu hin qabdu, hin qabaattus. Finfinneenis akkuma kanaati. Kennaa Oromooti. Qaamotni siyaasa Itiyoophiyaa carraa hunda-galeessa Finfinneen qabaattu gaarii akka ta’u taasisuuf dhugaa kana hubachuun filannoo tokkicha. Akkuma Misir seera haqa irraa maqsameen bishaan Abbayaa bifa fayyadamummaa Itiyoophiyaa dhorkuun guutuumaan guutuutti hanga dhumaatti itti fayyadamuu hin dandeenye, Finfinneenis karaa haqa-maleessaan Oromoo of keessaa dhiibdee jireenya itti fufuu hin dandeessu. Wanti ajaa’ibaa lachuu (Mormorii fi Finfinnee)’dhaan haqa dabsuu isaanii irra darbeeyyu kan wal isaan fakkeessu miidhaa isaan uummata irraan geessisanidha.
● Mormor biyyee gabbataa Itiyoophiyaa haree baatee Sudaanii fi Misiriif kenna. Kun immoo anaanuu dabalatee lammii Itiyoophiyaa hin aarsine hin qabu.
● Finfinneenis balfa ishee qonnaan bultoota Oromoo irratti of qulqulleessiti. Sababa kanaanis ijoollee fi loon qonnaan bulaa Oromoo balaa dhukkuboota garaagaraaf akka saaxil ba’an miidiyaaleen idil-addunyaa hedduun gabaasaniiru. Dhimmi kun ilma Oromoo hin aarsiin qaba jedhanii yaaduun immoo yaad-rimee armaan olitti waa’ee laga Mormor keenye sana irraanfachuudha. Amma lamaan isaaniiyyu maaltu sirriimatti walitti fidee? Yaadni “Nuyi uummatoota biyya tokkooti.” jedhu hin ka’iin hin hafu. Dhugumattuu nuyi uummata biyya tokkooti. Ta’us garuu utuuma ijoollee haadha tokkoo ta’aniyyu wanti ‘Haqummaa’ jedhamu jira. Dabalataanis immoo uummata Misir waliinis nuyi ilmaan haadha tokkooti. Ijoollee Hewaan/Hawwaati. Maaliree walumatti qabaatti nuyi ilmaan namaati mitii? Wanti kan biroon xiyyeeffannoo keessa galuu qabus jira. Akkuma Itiyoophiyaan “Laga Mormor guutummaatti hidhadheen uummatootni Misir immoo beela hamaan haa dhuman” hin jenne sana, Oromoonis Finfinneedhaan kan dhuunfaa kooti jedhee obboleessaa fi obboleettii isaa warra kaaniin “Isin anaa gadi.” hin jedhuuni. Gaaffiin lameen isaaniiyyu gaaffii haqummaati. Mormorii fi Finfinnee. Dhimma Itiyoophiyaa fi dhimma Oromoo!
← LAMMII BAAYISAA QANAATEE-Barataa Xobbee umurii waggaa 15 tti FXG rratti Mootummaa Wayyaaneen galaafatame.-MILKII MILKEESSAA FI MALKAA MOIBOON.
GAAFFILEE 22’N Geggeessaa Cimaan Torbanitti al tokko of gaafachuu qabu-Tamasgeen Axinaafuutiin →